Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 19)
Doogee S70 durba waa rasmi wuxuuna la yimaadaa astaamo iyo tilmaamo aad u xiiso badan. Baro wax walba oo ku saabsan moobiilka ugu horreeya ee rooga adduunka.
Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan Google Pixel 3 XL: barnaamijka kamaradaha dib loo habeeyay iyo samaacadaha dhagaha ee wireless-ka leh Kaaliyaha Google
Google Pixel 3 XL ayaa imanaya iminkana waxaan ka ogaanay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan samaacadaha dhagaha iyo barnaamijka kaamirada ee dib loo naqshadeeyay.
LG V40 ayaa laga bilaabi doonaa suuqa bisha Oktoobar
LG V40 ayaa ka bilaabi doona Kuuriyada Koonfureed bisha Oktoobar. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan dhamaadka-sare ee shirkadda Kuuriya ee imaan doonta deyrta.
Xiaomi waxay iibisay 32 milyan oo taleefannada casriga ah rubucii labaad. Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan iibinta taleefannada taleefannada Shiinaha ee wareegga labaad.
Wuxuu shaaca ka qaaday ogeysiiskii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Vivo X23. Raadi wax badan oo ku saabsan ogeysiiskii ugu horreeyay ee taleefanka cusub ee Shiinaha.
Shaandheeyey sawirradii ugu horreeyey ee LG V40
LG V40: Kaamirada gadaal seddexaad leh iyo muuqaalka sawiradeedii ugu horreeyay ee la sifeeyay. La soco naqshadda LG-da sare ee dhammaadka dhow soo socota.
Sawiradii uguhoreeyay ee lagusoo qaado Google Pixel 3 XL ayaa imanaya
Xirmo fara badan oo sawirro ah oo lagu qaaday Pixel 3 XL ayaa la soo daadiyay si loo muujiyo tayada ay taleefannada cusub ee Google ay qaddariso.